ICC oo qaaddacday codsigii racfaanka ee ay go'aankii maxkamadda ka qaateen madax hore oo reer Kenya ah - Sabahionline.com
ICC oo qaaddacday codsigii racfaanka ee ay go'aankii maxkamadda ka qaateen madax hore oo reer Kenya ah Maarso 11, 2012
Maxkamadda Dembiyada ee Caalamiga ah eek u taal Hague ayaa Jimcadii (9-ka March) diidday codsi ay soo gudbiyeen afar qof oo aad uga muuqda Kenya, codsigaas oo ay ku doonayeen in ay racfaan uga qaataan go’aankii ahaa in loo maxkamadeeyo qalalaasihii doorashooyinka ka dib, AFP ayaa werisay. Qodobbo la xiriira
EAC: Kiisaska Kenya waa in lagu maxkamadeeyaa Bariga Afrika
Arjiyada aya soo qorteen Raysal wasaare ku Xigeenka Uhuru Kenyatta iyo wasiir hore oo la yiraahdo William Ruto, iyo weliba faalleeyaha idaacadeed ee Joshua Arap Sang iyo madixii hore ee shaqalaha dawladda Francis Muthaura ayaa la “qaaddacay”, ayaa lagu qoray waraaqaha maxkamadda. Maxkamadda dembiyada dagaalka ee caalamiga ah ayaa 23-di January xukuntay in ay afarta nin maxkamadda u hor tagaan si ay uga jawaabaan qaybtii ay ku lahaayeen hirarkii qalalaase ee doorashada la xiriiray oo dhacay afar sano ka hor.
Dadka la dacweeyey waxaa ka mid ah, 50 jir ah, ahna wiilka uu dhalay aabbihii xornimada dalka, iyo Ruto oo 45 jir ah, oo ay labadaba madaxweynennimo u tartamayaan. Raggaa ayaa waxay ka mid ahaayeen lix nin oo ay ku oognayd dawcadda dembi bani’aadamnimada laga galay ah oo la xiriirta qalalaasihii doorashooyinka oo ay ku naf-waayeen 1,133 reer Kenya ah, dhawr boqol oo kunna ay ku khasbanaadeen in ay guryahooda ka barakacaan. Dacwadii lo haystay wasiirkii hore ee warshadaynta Henry Kosgey iyo taliyihii hore ee bilayska Maxamed Xuseen Cali ayaa la tuuray. Saddex beri ka dib markii la caddeeyey eedaymaha lidka ku ah afarta qof bishii January, ayuu Kenyatta ka rusqaystay wasiir maaliyadeedkii. Muthaura laftiisu wuu ka degay xilkii madaxa shaqaalaha dawladda. Dabadeed afartoodaba waxay arji u qorteen in ay racfaan ka qaataan go’aanka maxkamadda. Ma jeclaysatay maqaalkan?
December 5, 2012 @ 02:36:27PM
Dadkan waa in lala xisaabtamaa, sababtoo ah cida ay waxay sameeyeen go’aan ka gaadhaa waa maxkamada
March 13, 2012 @ 10:12:31AM
Afartaa walaaleheen ah ilaa hadda dambi malaha, xiitaa haddii si buuxda maxkamad loo hor geeyo, looma xidhi karo dambi aynan galin. Isla mar ahaantaa, dadkaa badan ee la laayay iyo kuwa guryahooda ka barakacay waa in xaqooda la siiyaa. Iyadoo la joogo xilli aan u dabaal-dagaynno tartanka madaxweynenimo ee Uhuru iyo Ruto, waxaan labadaas ogeysii lahaa in xiitaa dadka dhintay ay xaq leeyihiin oo ilaahayna uu arrintaas soo dhex gali doono asagoon dhinacna u eexanayn, Wax ka sotoo la soo maray, wax habboonna ilama aha inaan la xisaabin kuwa dambiyada galay. Waxaan aad ugu malaynayaa, in maxkamadayntu u dhici doonto si qaanuunka iyo shuruucda dadka waafaqsan.